काठमाडौं । नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य डोल्मा तामाङले पार्टीभित्र वृहत एकताको विकल्प नरहेको बताएकी छन् । पार्टीभित्र गुट हावी
काठमाडौँ । मुक्तक दिवसका काठमाडौंमा अवसरमा आयोजित मुक्तक मेलामा १३ जना नारी स्रष्टाका मुक्तकको विशेष वाचन गरिएको छ । नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठानको आयोजनामा सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर) जमलमा आयोजित एक
ललितपुर । ललितपुरको पाटन दरवार स्क्वायरमा अवस्थित भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयको प्रतीक्षापछि बुधबार साँझ गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनले पनि आम सर्वसाधारणमा आशा जगाउन सकेन । प्रधानमन्त्रीले केही विवादास्पद मन्त्रीहरुलाई यथावत राखेको र केही राम्रै
काठमाडौं । डा. भगवान कोइरालाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति वा चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षजस्ता शक्तिशाली पद छाडेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षको जिम्मेवारी स्वीकारे । धेरैका लागि उनको यो कदम अनपेक्षित थियो
नेपालगञ्जमा पनि शङ्खधर साख्वा चोकः विभूतिको नाममा राजनीति ?
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका गरीब जनताको ऋणमोचन गरेका राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको सम्मानका लागि पश्चिम नेपालको नेपालगञ्जमा पनि ‘शङ्खधर साख्वा चोक स्थापना गरिने भएको छ । नेपालगञ्जको कारकाँदो चोकमा शङ्खधर
अमेरिकी सेनाको घेराउमा परेपछि ‘सुसाइड भेस्ट’ विस्फोट गर्दै मारिए अल–बग्दादी
सिरिया (एजेन्सी): आतंककारी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) का नेता अल–बग्दादी मारिएका छन् । विश्वमा सबैभन्दा खोजी गरिएका व्यक्तिका रुपमा रहेका बग्दादीको मृत्युलाई अमेरिकाले ठूलो सफलता मानेको छ भने राष्ट्रपति डोनाल्ड
दोलखा । स्थानीय तहको केन्द्र आफ्नै गाउँमा लैजान दोलखाको एउटा गाउँपालिकाका तीन वडाध्यक्षले मध्यरातमा साविकको कार्यालय लुटपाट गरेका छन् । उनीहरुले गाउँपालिका अध्यक्षकै संरक्षणमा यसरी लुटपाट गरेका हुन् । कालिञ्चोक
सी चीनफिङले चीनविरोधीको हड्डी भाँच्ने चेतावनी किन नेपालमै दिए ?
काठमाडौं (एजेन्सी): चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको एक साताभन्दा बढी भइसके पनि यसबाट सिर्जित तरंगले विश्वभर खैलाबैला मच्चिएको छ । खासगरी उनले चीनविरोधी गतिविधि गर्नेहश्रलाई कठोर चेतावनी